zPoS – Zerocoin Idibanisa Ubungqina Bokubamba | PIVX
zPoS – Zerocoin Idibanisa Ubungqina Bokubamba
INgo-Oktobha 2017 sazisa inkqubo yethu yokwenza iZerocoin, i-zPIV. Ngokubonelela ubumfihlo obuphezulu, nokwenza abasebenzisi balinganise kunye nokuthengiselana ngokupheleleyo, siphumelele ukungabonakali kwangempela kubungqina bokubakho kweengxowa-mali.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga ne-zPIV, khangela ipapalati apha whitepaper here. Okwangoku, abasebenzisi abakhetha ukuhlala bengabonakali kwaye batyala imali egcinwe njenge-zPIV baphuma ngaphandle kwembuyekezo yokugcina umvuzo ukuze bahlale bebucala. Asizange sicinge ukuba kulungile. NgeZPoS (zPIV Proof of Stake) uza kukwazi ukugcina unobuncwane xa ufumana umvuzo wokubambisa, kanyekanye.
Ukuhamba nge-zPIV kunamalungelo amathathu abalulekileyo kubo bonke abasebenzisi abakhetha ukusebenzisa i-zPoS:A higher block reward compared to staking PIV.
Umvuzo ophakamileyo ophezulu xa ukhulisa i-PIV yakho.
Ikuvumela kunye neengqekembe zakho ukuba uhlale ngasese ngelixa uhamba.
Incedisa ngezizukulwana eziqhubekayo zamatye amasha kwisibini se-zPIV (accumulator) ukwandisa kakhulu ukuthengiswa kwexesha elizayo i-ZPIV ichitha, kunye nokungafihli.
Cinga ukuba ubani unokubona ukuba unayo imali enayo kwi-akhawunti yakho yokulondoloza? Oku kuyinyani xa ubeka i-cryptocurrency.
Okwangoku, i-staker ibhajethi yemali ibonakala kuluntu ngelixa ihamba. Oku kuthetha ukuba abantu bayakwazi ukukhahlela nge-block explorer kwaye babone ukuba yeyiphi idilesi ezithintela iimali zemali, ibhalansi, kunye nokufumana iidilesi zendalo.
NgeZPoS, oku akusayi kuba yimeko. Ngokuqinisekileyo “iStaking Staking” kubasebenzisi bethu. Ngethuba u-staking zPIV, akukho mntu uya kubona ukuba zininzi zeemali (idilesi) zihamba. zPoS inikezela ngononophelo olongezelelweyo wobumfihlo apho ungayifumana imivuzo, kwaye ukhusele inethwekhi, ngasese. Le mivuzo inokubanjelwa ukuqhubela phambili okanye ukuchitha ngasese ngaphandle komntu owaziyo ukuba yiyiphi idilesi eyithunyelwe ngayo. Le yindlela emangalisayo (kwaye iyimfuneko) yabasebenzisi bangebucala bangasifumana kwaye ibe yinto engekho enye i-PoS zemali ekhoyo ngoku.
Ingaba isebenza kanjani?
Abasebenzisi baya kukwazi ukugxininisa i-ZPIV nje nge-PIV eqhelekileyo, kodwa banokufumana umvuzo ophezulu xa kuphakanyiswa ubumfihlo kwaye kulula ukusebenzisa. Ngendlela yokufumana umvuzo omtsha, inzuzo ye-zPIV yokugcina ibhola iya kuba ngama-50% amakhulu kunokuba iPIV izenzele umvuzo.
I-PIVX, kunye nokusetyenziswa kwayo kwenkqubo ye-Zerocoin, sele ifezekisa ukungaziwa (i-accumulators) eyimigangatho yemigangatho emikhulu kunezinye ezininzi iimali zemfihlo kwiimarike. Nangona kunjalo, ngokungeniswa kweZPoS, i-PIVX iya kukwazi ukuhlala isondla i-Zerocoins (ZPIV) ngokuqinisekileyo ngokutshintsha ngokungaqhelekanga iiseti ngokulandela ukutshekisha kwemisebenzi ngokuthi ‘ixesha’ lingasondeli.
Njalo ixesha i-zPIV idibeneyo, iya kuvelisa ii-4 ezitsha ze-ZPIV kunye ne-original ye-zPIV yenani lenani kunye ne-3 x 1 zPIV zamahlelo ezenza umvuzo wesi-3 we-ZPIV. Oku kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba i-accumulators ibe isandul ‘uveliso lweZPIV rhoqo ngemizuzwana engama-60, ngaphandle komsebenzisi ukutyhila i-zPIV ngesandla.
Esi sizukulwana esisebenzayo seZerocoin siyinxalenye yento eyenza i-zPoS ikhetheke kakhulu.
Imivuzo emitsha yeStaking
Ukusebenzisa inkqubo yethu yolawulo I-PIVX yokuvota yanquma ukuhlaziya umvuzo webhloko. Ngaloovoti, inkxaso eyongezelelweyo iya kufumaneka kwi-budget yenyanga kunye nesiphakamiso.
Ukukhuthaza ukusetyenziswa okusebenzayo kwenkqubo entsha ye-zPoS, iistaker ezisebenzisa i-zPIV ziya kuvuzwa ngesabelo esiphezulu se-50% somvuzo webhloko. Umvuzo webhloko uza kwahlukana ngolu hlobo lulandelayo:
PIV staker finds block: 3 PIV to masternodes, 2 PIV to staker, 1 PIV budget
zPIV Staking (zPoS)
zPIV staker finds block: 2 PIV to masternodes, 3 PIV to staker, 1 PIV budget
zPoS will be included with core wallet update v3.1.0 – releasing March 31st, 2018!
Learn More About Our Release Schedule Here.
Be sure to follow us on Facebook and Twitter for the most up to date information! Have Questions?
Watch a short video interview with Bryan about zPoS
Imigaqo neMigaqo Yobumfihlo